ချစ်သူနဲ့အဆင့်ကျော်ပြီး လေးနှစ်လုံးအတူနေခဲ့တဲ့အကြောင်း အေသင်ချိူဆွေ ရင်ဖွင့်လိုက်ပြီ...! - Thadin
HomeCELEBRITYချစ်သူနဲ့အဆင့်ကျော်ပြီး လေးနှစ်လုံးအတူနေခဲ့တဲ့အကြောင်း အေသင်ချိူဆွေ ရင်ဖွင့်လိုက်ပြီ…!
May 15, 2019 Kay Kay CELEBRITY Comments Off on ချစ်သူနဲ့အဆင့်ကျော်ပြီး လေးနှစ်လုံးအတူနေခဲ့တဲ့အကြောင်း အေသင်ချိူဆွေ ရင်ဖွင့်လိုက်ပြီ…!
ပ ရိ သတ်ေ တွ လက်ခံအားပေးထားတဲ့ အဆိုတော် အေသင်ချိုဆွေကတော့ လက်ရှိချိန်မှာ အချစ်ရေးမှာကံအကြောင်းမလှခဲ့တာကြောင့် Single Mother တယောက် အနေနဲ့ ရပ်တည်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အေသင်ချိုဆွေကတော့ ယခုနောက်ပိုင်းမှာ Single Mother တွေကိုလည်း အားပေးစကားတွေ များစွာပြောကြားခဲ့ပြီး သူကိုယ်တိုင်လည်း ဘယ်လိုမျိုး စိတ်ဓါတ်ပိုင်းမှာ ပြင်ဆင်နေရလည်းဆိုတာတွေကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
သူ့သမီးလေး Ivy အတွက်လည်း တကယ့်ကို မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးနေတဲ့ အမေ တယောက်ဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုတွေ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရကာ ဘာတွေကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုတာကိုတော့ အေသင်ချိုဆွေ တယောက်က ဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါတယ်။
အေ သင် ချိုေ ဆွကတော့ “ အေသင်ဆိုရင် မင်္ဂလာမဆောင်ဘူး သမီးရည်းစား ဘဝမှာ တူတူနေကြတယ်။ ကလေးရလာတယ်။ တာဝန်ယူမှု မခံရပဲ စွန့်ပစ်ခြင်းခံရတယ်။Single Mother တယောက်ဖြစ်လာတယ်။
အဲ့လိုဘဝမျိုးကို ဘယ်သူမှ မလိုချင်ပါဘူး။ ဒါကတော့ ခေတ်လွန်သွားတာပေါ့နော်။ အဆင့်တွေ ကျော်သွားတယ်။ ၄ နှစ်တာလုံး ဒီလိုနေကြတယ်။ နောက်ဆုံး ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူး။ ဒီလူကိုချစ်ပြီး ကတည်းက ဘဝတခုတော့ တည်ဆောက်ချင်တာပေါ့နော်။
ဒါပေမယ့်လည်း ကြားထဲမှာ အဆင်မပြေတာတွေ ရှိတာပေါ့နော်။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ တွေးလိုက်တယ်။ ကိုယ့်ကို ချစ်နေရင်ပြီးပြီပေါ့နော်။ နောက်ဆုံး ဒီလိုဖြစ်လာတော့ ဒီလမ်းကို ရွေးချယ်လိုက်ရတာပေါ့နော်။
ဒီလိုမှ မရွေးချယ်ရင်လည်း ဘာလုပ်မှာလဲ ကလေးကို ဖျက်ချမှာလား။ အေသင်က ဒီလိုလည်း တကိုယ်ကောင်းမဆန်တတ်ဘူးပေါ့နော်။ တခြားသူတွေတော့ မပြောတတ်ဘူးပေါ့။ ကိုယ့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြောပြတာပါ။
အ ခု လိုေ ရွးချယ်လိုက်တဲ့ ဘဝက အဆင်ပြေလားဆိုတော့ အခက်ခဲတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ တခုခုဆို ကိုယ့်ကိုများ ပြောနေမလားဆိုပြီးတော့ မလုံတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဒီကလေးကိုယူမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်း လူ့ပတ်ဝန်းကျင်နောက်မှာ ကိုယ်က ကျန်နေခဲ့တယ်။ Single Mother လင်ကောင်မပေါ်ပဲ မွေးတယ်။ လင်ပစ်တာခံရတယ်ဆိုပြီးတော့ ကွယ်ရာမှာ ပြောနေကြတာပါပဲ။
ဒါပေမယ့်လည်း ပြောနေတာ ဘယ်လောက်ပြောနိုင်မလဲ။ ကိုယ့်မှာ မိခင်ကောင်း တယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိရင် ဘယ်လောက်ပြောမလဲ။ ဒီလိုမျိုး အဖြစ်အပျက်ကို အတုယူတာထက် လိမ္မာစေချင်တယ်။
လူတယောက်ကို အရမ်းမယုံစေချင်ဘူး။ ပြီးတော့ Single Mother တယောက်ရဲ့ ဘဝက တော်တော်မလွယ်ပါဘူး။ အဓိကကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်က ရိုက်ခပ်လာတဲ့ ဒဏ်ကို တော်တော်လေးခံရတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ်မှားသွားခဲ့ပြီးပြီ။ ပြန်လည်းပြင်လို့ မရတော့ဘူး။
ရင် ဆိုင် ရပါတယ်။ ခုဆို အေသင့်သမီးလေးဆိုရင်လည်း အားလုံးက ချစ်ကြပါတယ်။ အမေတွေရော အမျိုးတွေပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း စိတ်မကောင်းစရာ တခုက သူ့မှာ အသိုင်းအဝိုင်း နှစ်ခုမရှိဘူးပေါ့။
တခုပဲရှိတယ်။ လူဆိုတာက မရှိတဲ့အရာကိုမှ တောင်းတတတ်ကြတာ ဆိုတော့ ကြီးလာရင်လည်း သူအဲ့ဒီပြသာနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရဦးမှာပါ။ ကိုယ်ကကောင်းတာကြီးပဲ ရမယ်လို့ မစဉ်းစားထားဘူး။ ကိုယ့်ဆီကို လာမယ့် ဝေဖန်မှုတွေ ကဲ့ရဲ့မှုတွေ ရှုံချမှုတွေကိုပဲ ကြိုပြီးတော့ စဉ်းစားထားတဲ့အတွက် ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။
ဘယ်လိုတွေ ပြောပြော ကိုယ်က အရည်ချင်းရှိတဲ့ မိန်းမတယောက်ဆိုရင် ဘာကိုမှ ကြောက်နေစရာမလိုပါဘူး။ ဒါကလည်း အားပေးအားမြောက်လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
အရင်ဆုံး ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချလိုက်ရင်တော့ လူအဖွဲ့အစည်းမှာ လက်မခံတာတွေ ရှိလာမယ်။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ ဖျက်ချတာတွေလုပ်လာမယ်။ ကလေးကို စွန့်ပစ်တာတွေ လုပ်လာမယ်။
ဒါကြောင့်လည်း မိဘမဲ့ ဦးရေက တဖြည်းဖြည်းများလာတယ်။ ကိုယ်မှားတာတွေကို နောက်ကြောင်း ပြန်လှည့်ရင်း ဒီကလေးကို သတ်ပစ်မှာလား။ မွေးမှာလား။ နှစ်ခုပဲ ရှိတယ်။
အေသင်ကတော့ ဒီကလေးကို မွေးပြီးတော့ နှစ်ယောက်တူတူ ရင်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ပဲ ယူခဲ့တာပါ။ အဲ့တော့ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်လူဆိုတာ မှားပါတယ်။ အဲ့တော့ ရုန်းကန်ရပါတယ်။ ရင်ဆိုင်ရပါတယ်” ဟု ပြောကြားသွား ခဲ့ပါတယ်။
ပ ရိ သတျေ တှ လကျခံအားပေးထားတဲ့ အဆိုတျော အသေငျခြိုဆှကေတော့ လကျရှိခြိနျမှာ အခဈြရေးမှာကံအကွောငျးမလှခဲ့တာကွောငျ့ Single Mother တယောကျ အနနေဲ့ ရပျတညျနတော ဖွဈပါတယျ။
အသေငျခြိုဆှကေတော့ ယခုနောကျပိုငျးမှာ Single Mother တှကေိုလညျး အားပေးစကားတှေ မြားစှာပွောကွားခဲ့ပွီး သူကိုယျတိုငျလညျး ဘယျလိုမြိုး စိတျဓါတျပိုငျးမှာ ပွငျဆငျနရေလညျးဆိုတာတှကေို ရှငျးပွခဲ့ပါတယျ။
သူ့သမီးလေး Ivy အတှကျလညျး တကယျ့ကို မားမားမတျမတျ ရပျတညျပေးနတေဲ့ အမေ တယောကျဖွဈပွီး ဘယျလိုတှေ ရငျဆိုငျခဲ့ရကာ ဘာတှကွေောငျ့ ဒီလိုဖွဈရလဲဆိုတာကိုတော့ အသေငျခြိုဆှေ တယောကျက ဆှေးနှေးသှားခဲ့ပါတယျ။
အေ သငျ ခြိုေ ဆှကတော့ “ အသေငျဆိုရငျ မင်ျဂလာမဆောငျဘူး သမီးရညျးစား ဘဝမှာ တူတူနကွေတယျ။ ကလေးရလာတယျ။ တာဝနျယူမှု မခံရပဲ စှနျ့ပဈခွငျးခံရတယျ။Single Mother တယောကျဖွဈလာတယျ။
အဲ့လိုဘဝမြိုးကို ဘယျသူမှ မလိုခငျြပါဘူး။ ဒါကတော့ ခတျေလှနျသှားတာပေါ့နျော။ အဆငျ့တှေ ကြျောသှားတယျ။ ၄ နှဈတာလုံး ဒီလိုနကွေတယျ။ နောကျဆုံး ရှေးခယျြစရာမရှိတော့ဘူး။ ဒီလူကိုခဈြပွီး ကတညျးက ဘဝတခုတော့ တညျဆောကျခငျြတာပေါ့နျော။
ဒါပမေယျ့လညျး ကွားထဲမှာ အဆငျမပွတောတှေ ရှိတာပေါ့နျော။ ငယျငယျတုနျးကတော့ တှေးလိုကျတယျ။ ကိုယျ့ကို ခဈြနရေငျပွီးပွီပေါ့နျော။ နောကျဆုံး ဒီလိုဖွဈလာတော့ ဒီလမျးကို ရှေးခယျြလိုကျရတာပေါ့နျော။
ဒီလိုမှ မရှေးခယျြရငျလညျး ဘာလုပျမှာလဲ ကလေးကို ဖကျြခမြှာလား။ အသေငျက ဒီလိုလညျး တကိုယျကောငျးမဆနျတတျဘူးပေါ့နျော။ တခွားသူတှတေော့ မပွောတတျဘူးပေါ့။ ကိုယျ့ရဲ့ အတှအေ့ကွုံကို ပွောပွတာပါ။
အ ခု လိုေ ရှးခယျြလိုကျတဲ့ ဘဝက အဆငျပွလေားဆိုတော့ အခကျခဲတှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ တခုခုဆို ကိုယျ့ကိုမြား ပွောနမေလားဆိုပွီးတော့ မလုံတာတှလေညျး ရှိပါတယျ။
ဒီကလေးကိုယူမယျလို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတာနဲ့ လူ့အသိုငျးအဝိုငျး လူ့ပတျဝနျးကငျြနောကျမှာ ကိုယျက ကနျြနခေဲ့တယျ။ Single Mother လငျကောငျမပျေါပဲ မှေးတယျ။ လငျပဈတာခံရတယျဆိုပွီးတော့ ကှယျရာမှာ ပွောနကွေတာပါပဲ။
ဒါပမေယျ့လညျး ပွောနတော ဘယျလောကျပွောနိုငျမလဲ။ ကိုယျ့မှာ မိခငျကောငျး တယောကျအဖွဈ ရပျတညျနိုငျတဲ့ အရညျအခငျြးရှိရငျ ဘယျလောကျပွောမလဲ။ ဒီလိုမြိုး အဖွဈအပကျြကို အတုယူတာထကျ လိမ်မာစခေငျြတယျ။
လူတယောကျကို အရမျးမယုံစခေငျြဘူး။ ပွီးတော့ Single Mother တယောကျရဲ့ ဘဝက တျောတျောမလှယျပါဘူး။ အဓိကကတော့ ပတျဝနျးကငျြက ရိုကျခပျလာတဲ့ ဒဏျကို တျောတျောလေးခံရတာပါ။ ဒါပမေယျ့လညျး ကိုယျမှားသှားခဲ့ပွီးပွီ။ ပွနျလညျးပွငျလို့ မရတော့ဘူး။
ရငျ ဆိုငျ ရပါတယျ။ ခုဆို အသေငျ့သမီးလေးဆိုရငျလညျး အားလုံးက ခဈြကွပါတယျ။ အမတှေရေော အမြိုးတှပေါ။ ဒါပမေယျ့လညျး စိတျမကောငျးစရာ တခုက သူ့မှာ အသိုငျးအဝိုငျး နှဈခုမရှိဘူးပေါ့။
တခုပဲရှိတယျ။ လူဆိုတာက မရှိတဲ့အရာကိုမှ တောငျးတတတျကွတာ ဆိုတော့ ကွီးလာရငျလညျး သူအဲ့ဒီပွသာနာတှနေဲ့ ရငျဆိုငျရဦးမှာပါ။ ကိုယျကကောငျးတာကွီးပဲ ရမယျလို့ မစဉျးစားထားဘူး။ ကိုယျ့ဆီကို လာမယျ့ ဝဖေနျမှုတှေ ကဲ့ရဲ့မှုတှေ ရှုံခမြှုတှကေိုပဲ ကွိုပွီးတော့ စဉျးစားထားတဲ့အတှကျ ခံနိုငျရညျရှိပါတယျ။
ဘယျလိုတှေ ပွောပွော ကိုယျက အရညျခငျြးရှိတဲ့ မိနျးမတယောကျဆိုရငျ ဘာကိုမှ ကွောကျနစေရာမလိုပါဘူး။ ဒါကလညျး အားပေးအားမွောကျလုပျတာ မဟုတျပါဘူး။
အရငျဆုံး ဒီလိုလုပျမယျဆိုတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြကို ခလြိုကျရငျတော့ လူအဖှဲ့အစညျးမှာ လကျမခံတာတှေ ရှိလာမယျ။ ဒီလိုဆိုရငျတော့ ဖကျြခတြာတှလေုပျလာမယျ။ ကလေးကို စှနျ့ပဈတာတှေ လုပျလာမယျ။
ဒါကွောငျ့လညျး မိဘမဲ့ ဦးရကေ တဖွညျးဖွညျးမြားလာတယျ။ ကိုယျမှားတာတှကေို နောကျကွောငျး ပွနျလှညျ့ရငျး ဒီကလေးကို သတျပဈမှာလား။ မှေးမှာလား။ နှဈခုပဲ ရှိတယျ။
အသေငျကတော့ ဒီကလေးကို မှေးပွီးတော့ နှဈယောကျတူတူ ရငျဆိုငျသှားမယျဆိုတဲ့ စိတျနဲ့ပဲ ယူခဲ့တာပါ။ အဲ့တော့ ဘယျလိုပဲ ဖွဈဖွဈလူဆိုတာ မှားပါတယျ။ အဲ့တော့ ရုနျးကနျရပါတယျ။ ရငျဆိုငျရပါတယျ” ဟု ပွောကွားသှား ခဲ့ပါတယျ။
ကနဦး သတင်း စာသင်​ခန်းအတွင်း မှ က​လေးအ​ယောက်​ ၂၀ ခန့်ရန်​ကုန်​အ​ရေး​ပေါ်ဌာနသို့ ​ရောက်​ရှိ…!
This Year : 232292
Total Users : 591316
Total views : 2712447